Archive du 20190311
Marc Ravalomanana Ho avy masiaka amin’izay
Nanomboka hita sy niseho vahoaka indray i Marc Ravalomanana ny 8 martsa lasa teo, rehefa tsy dia tazana firy taorian’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa.
Antenimieram-pirenena Tsimbazaza Mitady ho lasa « Antenimihira »
Ekena tokoa fa efa saika nahitana artista daholo ny antenimieram-pirenena nandalovan’ireo repoblika nisy teto amin’ny firenena.
Kandidan’ny TIM.K25 Boriboritany faha-4 Vonona hihaino ny mponina sy hamaha ny olany
Tafapetraka ny faran’ny herinandro teo ny antontan-taratasy firotsahan-kofidian’ny kandida depiote avy amin’ny vondrona TIM.K25 ao amin’ny Boriboritany faha-4, Kaominina Antananarivo Renivohitra.
Alain Ratsimbazafy “Hatsaraintsika ny fifandraisan’ireo olom-boafidy”
Vonona hanefa ny adidy nankinin’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana aminy Atoa Alain Ratsimbazafy, kandida voafidin’ny antoko Tiako I Madagasikara hifaninana amin’ny fifidianana solombavambahoaka ao anatin’ny distrikan’ Atsimondrano.
Mpandraharaha Maro no te ho depiote
Iray andro sisa dia hikatona ny fe-potoana ahafahana manatitra ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana amin`ny fifidianana solombavambahoaka manerana an`I Madagasikara.
Andry Rajoelina any Maorisy Mitalaho famatsiam-bola ho an’ny IEM
Nigadona tany Maorisy omaly alahady i Andry Rajoelina mivady sy ny delegasionina tarihiny, ka ny Praiminisitra Maorisianina Pravind Jugnauth mivady no nitarika ny delegasionina nitsena azy ireo teo am-pahatongavana tao amin’ny seranam-piaramanidina Sir Seewoosagur Ramgoolam.
Solombavambahoakan’i Tana V Hanao poa-droa no fanambin’ny TIM
Tafapetraka soa aman-tsara ny sabotsy teo ny antontan-taratasy. Dingana voalohany no vita fa mbola hisy ny fivoriana isan’ambaratongany hoenti-manomana ny hoavy ary mbola ao anatin’ny tsiambaratelon’ny antoko aloha hatreto,
TIM Boriborintany faha-6 Miomana fatratra amin’ny fifidianana
Lanonam-be ny teny Espace Sansas Ambodihady Ambohimanarina, nisian’ny fifampiarahabana teo amin'ny TIM Boriborintany faha-6 sy ny vahoaka ho firaisankinan’Ambohimanarina sy Antehiroka "Enin-dray, enin-dreny" ary fisaorana azy ireo noho ny ezaka vita sy ho fiomanana amin'ny dingana manaraka.
Fanorenana ifotony ny lalàna Antony hilatsahana depiote, hoy ny FMDD
Tsy maintsy mirona any amin’ny resaka solombavambahoaka amin’izao fotoana izao, hoy ny avy eo anivon’ny antoko politika Faneva de Madagascar pour le Developement et la Démocratie (FMDD) tarihin’ny filohany, Rochel Rafanomezantsoa.
Tanà Shooters BasketBall Nahatontosa fambolen-kazo andiany faha-3
Ankizy mpianatra basikety avy ao amin’ny Tanà Shooters BasketBall niaraka tamin’ireo “Coach” ao aminy sy ray aman-dreny vitsivitsy no nanatanteraka ny fambolen-kazo 2019 teny Mahajija ambanin’Anosivola eny Mahitsy tamin’ny sabotsy 09 martsa 2019 teo.
Faha 15 taonan’ny CEDS Fiarovana ny tontolo iainana no Tsangambato
Ho tsangambato fanamarihana ny faha 15 taona nisian’ny ivon-toerana ambony mampiofana momba ny diplomasia na ny CEDS (Centre d’Etudes diplomatiques et Strategiques) dia misy ny tetikasa fiarovana ny tontolo iainana sy fanatsarana ny fandriampahalemana eny amin’ny ala ho tarihin’ny komity mpikarakara izay fankalazana izay.
Tsipy Kanetibe « Doublette Mixte » Tompondakan’i Madagasikara i Tsiory sy Balloteli
Nifarana tetsy amin’ny Boulodrôme CBT Mahamasina omaly alahady 10 martsa 2019 ny “Grande finale” teo amin’ny Tsipy Kanetibe sokajy “Doublette Mixte”.
As Andry Bongolava Hampiakatra ny fitoriany any amin’ny FIFA
Nitovy tsy nisy valaka tamin’izay navalin’ny “Commission de discipline” ao amin’ny Federasionina Malagasin’ny baolina kitra (FMF) ihany, hoy ny filohan’ny klioban’ny As Andry Bongolava,
Asan-jiolahy, trafika tao anatin’ny iray volana Fitaovam-piadiana an-jatony, rongony 1000 kg no tratra
Nampiseho ny hangingany ireo mpitandro filaminana amin’ny fahatratrarana manara-penitra nyrongony, sokatra ary fitaovam-piadiana mahery vaika. Rongony amin-taonina no tratran’ny
MPANENDAKA TENY FARAVOHITRA
Nofatoran’ny olona ary notaritaritina tamin’ny tany eraky ny tanàna ilay jiolahy izay voasambotry ny olona tetsy Faravohitra.
Loton’ Antananarivo Ilàna vahaolana maharitra sy mahomby
Iaraha-mahita ny fahamaroan’ny fako sy ny loto eto Antananarivo renivohitra ary tena tokony hijerena vahaolana mihitsy ny amin’izany mba ho tombony.
Soarano Maimbo tsy azo hampiasaina ny ranon’ny JIRAMA
Maimbo tsy azo hampiasaina ny rano vatsian’ny JIRAMA eny Soarano (Antananarivo I) amin’izao fotoana izao.
Famokarana siramamy ao Brickaville Nampanantena ny hamaha ny olana i Mamitiana Razafinantoanina
Mampitaraina ny mponina ny fahatarana ara-pandrosoana mianjady amin’ny distrikan’i Brickaville ankehitriny.